3D ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘေလ်ဘုတ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
3D ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘေလ်ဘုတ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?နိဒါန်း- ကြော်ငြာများတွင် ဘေလ်ဘုတ်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။၎င်းသည် အမှတ်တံဆိပ်သိရှိနားလည်မှုကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် ထုတ်ကုန်အတွက် မြင့်မားသောလက်လှမ်းမီမှုရရှိရန်အတွက် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ကြော်ငြာဘုတ်များသည် အမြင်အာရုံခံစားမှုကို ပေးဆောင်သည်။ရဲရဲတင်းတင်း ကြော်ငြာတွေနဲ့ အလုပ်အရှုပ်ဆုံးတွေတောင်...
21-12-24 ရက်နေ့တွင် admin မှ
VDwall LVP909 4K ဗီဒီယို ပရိုဆက်ဆာ နှင့် Splicer သင်၏ စီးပွားဖြစ် LED ပြကွက်များ ဗီဒီယိုကို ပြန်လည်ဖန်တီးရန် ဗီဒီယို ခွဲစက်ကို သင်ရှာဖွေနေပါသလား။အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် စီးပွားဖြစ် LED ဖန်သားပြင်ဟု ယူဆသည့်အခါ ၎င်းသည် သင်၏ LED ဗီဒီယိုအကန့်အတွက် ကောင်းမွန်သော အပိုပရိုဂရမ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး LED display သည် attr တွင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့် ...
အရောင်အလင်း X1/X2/X3/X4/X6/X7/X8 ဗီဒီယို ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
21-12-22 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Colorlight X1/X2/X3/X4/X6/X7/X8 Video Controller သင်သည် သင်၏ P3.91 LED မျက်နှာပြင်အတွက် ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ရှာဖွေနေပါသလား။ပြသထားသော LED ဗီဒီယိုများအတွက် နက်နဲစွာ ထိန်းချုပ်ထားသော ဂရပ်ဖစ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်လိုအပ်ပါသလား။သို့ဆိုလျှင်၊ ဤတောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ရှာဖွေခြင်းသည် ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါအတွက်...
အရောင်အလင်း Z4/Z6/Z6 PRO စူပါဗီဒီယိုထိန်းချုပ်ကိရိယာ
Colorlight Z4/Z6/Z6 PRO Super Video Controller သင်သည် သင့် LED ပြသသည့် ဂရပ်ဖစ်ရလဒ်အတွက် တန်ဖိုးပိုပေးနိုင်သည့် အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိရောက်သော ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ရှာဖွေနေပါသလား။သို့ဆိုလျှင်၊ အရည်အသွေးမြင့် 4K ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့အပြင် ဗီဒီယို ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ...
အရောင်အလင်း C1/C2/C3/C4/C6/C7 LED ထိန်းချုပ်ကိရိယာ တိမ်တိုက်-စီးရီး ပလေယာ
Colorlight C1/C2/C3/C4/C6/C7 LED Controller Cloud-series Player သင်သည် သင်၏ LED မျက်နှာပြင်များ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် LED ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ပလေယာကို ရှာဖွေနေပါသလား၊ သင့်လုပ်ငန်းသုံး display မျက်နှာပြင်ကို လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် LED controller player ကို ရှာဖွေနေပါသလား။သို့ဆိုလျှင်၊ Cs မှ Colorlight ၏ LED Controller Players မော်ဒယ်များ။
Novastar TB1-4G/TB2-4G/TB30/TB40/TB50/TB60 Taurus မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
admin မှ 21-12-16 ရက်နေ့တွင်
Novastar TB1-4G/TB2-4G/TB30/TB40/TB50/TB60 Taurus မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ ဗွီဒီယိုပြသမှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ဤပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းသည် ဂိမ်း သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာစနစ်အတွင်း တီဗီဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှတ်သည့် စက်ပစ္စည်းဟုလူသိများသည့် ဗီဒီယိုအချက်ပြမီးစက်တစ်ခုတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။မှလွဲ၍...
Novastar MRV366/MRV336/MRV328/MRV216/MRV210/MRV208 MRV ကတ်များ လက်ခံရယူခြင်း
21-12-15 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Novastar MRV366/MRV336/MRV328/MRV216/MRV210/MRV208 MRV လက်ခံရယူခြင်းကတ်များ အလုံးစုံအကျိုးသက်ရောက်မှု ပျော့ပျောင်းသော နှစ်ထပ်ရောင် LED မျက်နှာပြင်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် LED လက်ခံကတ်ကို သင်ရှာဖွေနေပါသလား။အစစ်အမှန် pixels များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ virtual pixels နှင့် double နှင့် single color များအထိ၊ LED receiver c...
Novastar MCRTL 4K/MCRTL1600/MCRTL R5 4K ဗီဒီယိုပြသမှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
21-12-14 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Novastar MCRTL 4K/MCRTL1600/MCRTL R5 4K ဗီဒီယိုပြသမှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ 4K ဗီဒီယို ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ဝယ်ယူရန် စိတ်ကူးကို ကျေနပ်ပါသလား။ကောင်းပြီ၊ 4K Video Controller သည် အရည်အသွေးမြင့်-စခရင် ဗီဒီယိုမြင်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးသည့် ပလပ်နှင့်-ကစား ဟာ့ဒ်ဝဲဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ဤဗီဒီယိုမြင်ကွင်းကို LED နံရံတွင်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်သည်...
Novastar NovaPro UHD/NovaPro HD/VX6s/VX4S/VX4U/VX400s LED ဗီဒီယို ပရိုဆက်ဆာ
Novastar NovaPro UHD/NovaPro HD/VX6s/VX4S/VX4U/VX400s LED Video ပရိုဆက်ဆာ LED ဗီဒီယိုပရိုဆက်ဆာသည် သင့် LED မျက်နှာပြင်ကို အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ဤရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်၊ ၎င်းသည် သင်၏ ရောင်စုံ LED မျက်နှာပြင်အတွက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ဒါအပြင်...
မီးရထားနှင့် လေဆိပ် LED မျက်နှာပြင်နှင့် ပျံသန်းမှု အချက်အလက်ပြသမှုများ
နိဒါန်း လေဆိပ်များသည် အလုပ်များသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။လေဆိပ်ကို ရောက်ဖူးရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လောက် ဖိစီးနေလဲ သိလား။လူတိုင်းသည် မိမိတို့လိုချင်သော ပန်းတိုင်ကို မှန်ကန်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ရောက်ရှိရန် စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။သတင်းမှားများသည် လေဆိပ်တွင် ကြီးမားသော ပရမ်းပတာဖြစ်စေနိုင်သည်။ဒီလို ပရမ်းပတာ နဲ့ သတင်းမှားတွေ ဖြစ်နိုင်ချေ...
Outdoor Led Display ၊ ဆိုင်းဘုတ် Led Display မျက်နှာပြင် Led မျက်နှာပြင် LED ရုပ်ထွက် Outdoor Led မျက်နှာပြင်